Wanna One အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ UNESCO နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက အမျိုးသမီးလေးတွေပညာရေးအတွက် ထောက်ပံ့မှုပေးခဲ့ကြ
On March 5, 2018 March 5, 2018 By Naing Naing
အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ K-Pop Boy Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wanna One အဖွဲ့လေးကတော့ UNESCO အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Wanna One အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေကို အပြည့်အဝထောက်ပံ့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ UNESCO ရဲ့ ‘Bright Girls’ Campaign မှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ ဒီ Campaign လေးမှာတော့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး စစ်ဘေးဒဏ်တွေကြောင့် ပညာသင်ကြားခွင့်မရရှိကြတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး လှုပ်ရှားတဲ့ Activity လေးတွေ ပါရှိနေပါတယ်။
Wanna One အဖွဲ့ဟာ Instagram မှာ “သူတို့ဟာ UNESCO ရဲ့ Ambassador တွေအဖြစ်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ပညာရေးအကူညီလိုအပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ယူဆောင်ပေးပါ့မယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်း ပညာတတ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရရှိလာကာ သူမတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို ပြည့်ဝလာဖို့အတွက် ကူညီမှုတွေပေးပါ့မယ်” လို့ ပြေကြားထားပါတယ်။
Wannable လေးတွေကလည်း Instagram ရဲ့ @forbrightgirls Campaign လေးကို join ပြီးတော့ Wanna One အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ ပါရမီဖြည့်ရင်းပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်..။ Wannable တွေရေ Oppa တွေအားရှိသွားအောင် ဒီ ‘Bright Girls’ Campaign လေးမှာ အတူတူ Activity လေးတွေ ပါဝင်လှုပ်ရှားပေးလိုက်ပါဦးနော်။
Wanna One l Wanna One X Girls' Education . 워너원이 유네스코 소녀교육 캠페인과 함께합니다. 워너원과 워너블이 함께하는 세상에서 가장 빛나는 약속! . @forbrightgirls 인스타그램을 Follow 하고, 워너원과 함께 소녀들을 위해 약속해주세요! 1,111분께 Promise Ring을 드립니다! (캠페인 시작: 3월 11일 부터) 자세한 내용은 @forbrightgirls 인스타그램을 참고하세요! . #BrightGirlsXWannaOne #BrightGirls #GirlsEducation #WannaOne #워너원
A post shared by Wanna One 워너원 (@wannaone.official) on Mar 4, 2018 at 6:09pm PST
PREVIOUS POST Previous post: SHINee အဖွဲ့သားတွေက ဂျပန် Dome Tour မှာ Jonghyun ကိုသတိရတဲ့စိတ်နဲ့ လွမ်းဆွတ်စရာ စာတစ်ကြောင်းပေးပို့ခဲ့ကြ
NEXT POST Next post: Taylor Swift ရဲ့ Reputation Tour မှာအဖွင့်သီချင်းဆိုကြမယ့် Camila နဲ့ Charli XCX